Canada - Emechibidoro na ọdụ ụgbọ mmiri kachasị na Canada dị ka ndị na-ebubata ụgbọ mmiri na-anọchi mmechi ụzọ ụgbọ oloko - D T KA EGO
Canada - Emechibidoro na-abanye ọdụ ụgbọ mmiri kachasị na Canada dị ka ndị na-ebubata ụgbọ mmiri na-asọpụrụ mmechi ụgbọ okporo ígwè
Adezọ ụgbọ oloko nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Ontario emeela ka ndekọ na ọdụ ụgbọ mmiri atọ kachasị ukwuu na Canada, na-akpali ụfọdụ ndị na-ebu ụgbọ mmiri na-ewere azụmaahịa ha ebe ọzọ ka ibu na-ebubata ma kwụghachi ụgwọ ndị ọrụ.
Ngagharị iwe a sochiri Canadian National Railway track nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Belleville, Ontario., Akwụsịla netwọk CN nke ọwụwa anyanwụ - ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ọrụ ya - na gbupu ụgbọ mmiri site n'ụsọ osimiri gaa n'ụsọ osimiri.
Atlantic Container Line (ACL), bụ isi n'ọdụ ụgbọ mmiri US, na-atụgharị na Port of Halifax maka ọdụ ụgbọ mmiri US. Thelọ ọrụ a, nke na-ebubata ụgbọ mmiri abụọ otu izu, na-akụ ugbu a na New York na Baltimore iji rụọ ụgbọ mmiri na-aga n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri America, onye isi ala Andrew Abbott kwuru.
“Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri anyị ga-esi na North America. Yabụ, ọ bụrụ na ibupu ụzọ ụgbọ mmiri, ọ na-emebi pasentị 90 nke ihe anyị na-etinye n'ụgbọ mmiri, "Abbott kwuru, onye ụlọ ọrụ ya na-akpọ na ọdụ ụgbọ mmiri Halifax kemgbe ihe karịrị afọ 50.
Akụkọ na-aga n'ihu n'okpuru mgbasa ozi
GỤKWUO: Ndị ọrụ RCMP na-anọgide na ngalaba Wet'suwet'en, mana na-eme atụmatụ 'na mmegharị' iji kwaga ndị ọrụ
ACL na-ejikarị ihe dị ka akpa ihe dị ka puku ụkwụ abụọ 2,000 kwa izu na Halifax na-eburu ihe niile si na akpaaka Ontario gaa chiiz French.
“Ọ bụ mbibi azụmahịa nke ndị na-emepụta Canada. Ọ bụ mmebi ego nke ụmụ nwoke na-ebubata mmanya French ma ọ bụ kuki butter Walkers, n'ihi na ha anaghị aga na shelves, "Abbott kwuru. "Onye ọ bụla na-akwụ otu."
Halifax longshoremen na-arụkwa ọrụ - ma na - erite obere ego, ebe ihe karịrị pasenti 60 nke ngwongwo na-agafe n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ nke ụgbọ oloko na-enweghị ike ibu ibu, ọnụ na-ekwuru ndị isi ọdụ ụgbọ mmiri Lane Farguson kwuru.
Ihe mgbochi ahụ na-akpaghasị azụmaahịa maka onye ọ bụla site na stevedores ruo ndị na-anya ụgbọala, ndị na-eburu ngwongwo, ndị na-ebubata ya, ndị na-ebubata ya na ọdụ ụgbọ mmiri na okporo ụzọ.
N'ezie, ọ bụ ọnọdụ tara akpụ nye onye ọ bụla metụtara. ”
GỤKWUO: Wet'suwet'en onye isi ketara eketa na-enye onyinye iji zute 'ngwa ngwa' iji kpaa maka ịhapụ RCMP
Na Montreal, ihe dị ka ngwongwo 4,000 na-anọdụ ala n'ọdụ ụgbọ mmiri na ngwaahịa buru ibu Prairie dị ka ọka enweghị ike iru n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Nkwupụta ọnụ na-ekwuchitere Melanie Nadeau kwuru na "O doro anya na anyị nwere nchegbu banyere ọnọdụ a, nke nwere mmetụta dị ukwuu na akụ na ụba na ụgbọ njem ụgbọ njem na-eje ozi n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ."
Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ ụgbọ mmiri na-echere arịlịka ịbanye na mpaghara Vancouver nwere ihe karịrị okpukpu abụọ ruo 50 n'ihi usoro njem ụgbọchi ekpuchiri, ọ bụ ezie na ọ nweghị ụgbọ mmiri na-ahọrọ ọdụ ụgbọ mmiri US n'ihi nke a, ọnụ na-ekwuru Vancouver Fraser Port Authority na-ekwuru Melanie Nadeau.
Ihe fọrọ nke nta ka izu abụọ gara aga, ndị ngagharị iwe gbochiri ụzọ ịbanye na ọdụ ụgbọ mmiri kacha ibu nke Canada ruo ọtụtụ ụbọchị, otu n'ime ọtụtụ mkpọchi ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri, ụzọ ụgbọ okporo ígwè na okporo ụzọ gafee mba ahụ.
CN mechiri netwọ ọwụwa anyanwụ ya dị oke mkpa ụbọchị asatọ gara aga mgbe ndị ngagharị kwụsịrị mgbochi na Tyendinaga Mohawk Territory na Feb. 6 na nkwado ndị isi Wet'suwet'en na-eketa ihe nketa na-emegide ọkpọkọ mmanụ gas sitere n'okike gafere n'ala ọdịnala ha na British Columbia.
GỤKWUO: RCMP kwenyere ịhapụ ókèala Wet'suwet'en, zie oku maka mkparịta ụka 'ọsọsọ.'
Downgbọ okporo ụzọ ahụ na-abanye n'akụkụ ndị ọzọ. Ekele Superpane, onye na - eweta mmanụ ọkụ kacha ukwuu na Canada, kwuru na ọnọdụ a na - akawanye njọ ka ọ na - amalite nkesa nkesa na Atlantic Canada maka nchegbu ndị ụlọ ọgwụ, ụlọ ndị nọọsụ na ezinụlọ nwere ike gwụ.
“Nke a bụ nsogbu na-ebilite. Obu ihe nwute ma oburu n’iru n’ihu otutu ubochi o gha abu ihe siri ike nye ndi ulo oru prope iji gbakee ososo ndi mmadu n’enye ha, ”onye isi ulo oru Greg McCamus kwuru na mkparita uka ekwenti.
O kwuru, ụlọ ọrụ Propane nwere otu ihe ma ọ bụ izu abụọ dị n'aka, na-atụkwasị netwọ ụgbọ oloko na gwongworo ibuga ya site na ọdụ ụgbọ okporo ígwè gaa ebe a na-echekwa obodo. Railgbọ okporo igwe na-ajụ oyi na-akụda ụdọ ahụ, na-ebute ụzọ ụgbọ ala ogologo oge ruo elekere 10 maka propane na Sarnia, Ontario., Onye isi ụlọ ọrụ Canada Propane Nathalie St-Pierre kwuru.
Mana mmetụta sara mbara na onodu aku na uba nwere ike buru oke aka 0.2 pasent isi rue uto GDP, RBC Nathan Janzen - nwere ike ịbụ na iri nde kwuru nde. Ma mmetụta ụfọdụ na-emetụta “ụfọdụ” n'akụkụ ngalaba ụgbọ okporo ígwè na n'ichepụta ọrụ.
GỤKWUO: BC RCMP meghere ọnụ ụzọ ịhapụ ókèala Wet'suwet'en iji kwụsị njedebe mgbochi
Na Wenezdee, Via Rail kwupụtara ụgwọ ọrụ nwa oge maka ndị ọrụ 1,000 ka ọrụ ya nke Montreal-Toronto, Ottawa-Toronto na Montreal-Quebec City ka kwụsịtụrụ.
Na mbido izu a, CN napụrụ ndị ọrụ 450 ọrụ nwa oge ka ha rụọ ọrụ ya na Eastern Canada mgbe ha kagburu ihe karịrị ụgbọ oloko 400 kemgbe ebilite ebilite.
Nnukwu ndị na-ebu ihe na-enyocha mkpọchi ndị ahụ. Onye nnukwu ụgbọ mmiri German nke Hapag-Lloyd gara n'ihu na-akpọ oku na ọdụ ụgbọ mmiri Halifax, mana na-enyocha ọnọdụ ahụ "iji nwee ike ịpụ ma ọ bụ ibugharị ụgbọ mmiri," onye na-ekwuchitere Tim Seifert kwuru.
Nsogbu a na-egbu ihe ruru nde $ 425 na ngwa ahịa kwa ụbọchị, dịka otu ndị na -eme azụmahịa na ndị na-ebubata ihe na mba Canada kwuru.
MP Conservative na-ekwu na gọọmentị na-egbochi mgbochi okporo ụzọ gọọmentị na-emetụta ntinye gas, ndị okenye
© 2020 Akwụkwọ akụkọ Canada
NKWUKWU SITE STANDARD
AKW ANKWỌ ERROR
Isiokwu a pụtara na mbụ https://globalnews.ca/news/6579757/blockade-trips-up-canadas-ports/
Okwu ikpe Harvey Weinstein: ndị juri na-atụ aro nkewa karịa ebubo abụọ kachasị njọ - New York Times
Mpaghara atọ: "Ndị omekome 200 wezugala", ndị nkịtị 12 nwụrụ na Ouenkoro